Dhiigkarka Carruurta, Sababaha Keena Iyo Sida Looga Hortegi Karo… | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Published: October 12, 2017, 7:53 pm
Dhiigkarku waxa uu ka mid yahay dhibaatooyinka caafimaad ee carruurta dunida maanta sida aadka ah ugu soo badanaya. Sababaha keenana waxaa ugu badan miisaanka carruurta ee sii kordhaya iyo xarakaadka iyo ciyaarta oo ku yaraaday carruurta, waxaa iyaduna qayb weyn sababta ka ah isticmaalka badan ee internet ka.
Cilmibaadhis caalamiya oo uu Kobciye.Com natiijadeeda ka soo xigtay shabakadda Aljasiira wararka ee Aljasiira ayaa daahfurtay in uu xidhiidh ka dhexeeyo Dhiigkarka iyo buurnida iyo isticmaalka badan ee shaashadaha multimedia loo yaqaanno iyo internet ka. Cilmibaadhayaasha oo sharraxaya waxa ay uga jeedaan ‘Isticmaalka badan’ ayaa sheegay in uu yahay marka maalin kasta laba saac la isticmaalo. Waxa aana waajib ah in dhiigkarka la daweeyo waqtiga ku habboon, haddii kale uu keenayo khatarta ah in uu dhaawac gaadhsiiyo wadnaha, kelyaha iyo in uu dhiigfuran maskaxda ku keeno.